Luxembourg iyo Midowga Yurub oo bah-dilay Pompeo. |
Luxembourg iyo Midowga Yurub oo bah-dilay Pompeo.
UK(GNN):-Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa baajiyey safar u uku tegi lahaa Yurub, kadib markii wasiirka arrimaha dibedda Luxembourg iyo saraakiisha Midowga Yurub ay diideen inay la kulmaan.
Saraakiisha Yurub ayaa qaadacay Pompeo maalmo kadib markii burcad taageersan madaxweyne Trump ay qabsadeen xarunta Congress-ka, taasi oo ah weerar aan horey u dhicin oo lagu qaaday dimqoraadiyadda Mareykanka, kana yaabiyey hoggaamiyeyaasha caalamka.
Pompeo, oo ah xulufo aad ugu dhow Trump, ayaa doonayey inuu Jean Asselborn kula kulmay dalka Luxemburg oo ah dal yar balse ah hodan muhiiim u ah gaashaanbuurta NATO, kahor inta uusan hogaamiyeyaasha Yurub kula kulmin magaalada Brussels, sida ay ilo-wareedyo u sheegeen wakaaladda wararka Reuters.
Safarka Pompeo ee Luxemburg ayaa la baajiyey kadib markii saraakiisha ay ka cago jiideen inay ballan saacadeed u qabtaan. Safarka Brussels ayaa sidoo kale la baajiyey.
“Hogaamiyeyaasha Yurub waxay ceeb u arkeen la kulanka Pompeo kadib rabshadihii Arbacadii tagtay ka dhacay Washington,” waxaa sidaas yiri diblomaasiyiin Yurub ah oo la hadlay Reuters.
Trump ayaa taageerayaashiisa ku dhiiri-geliyey inay ku xoomaan Aqalka Capitol Hill oo ay ka socotay ansixinta doorashadii Joe Biden ee xilka madaxweynaha Mareykanka, taasi oo Trump uu diiday inuu aqbalo in looga adkaaday.
Pompeo ayaa cambaareeyey rabshadihii Capitol Hill-ka hase yeeshee wax tixraac ah kuma sameyn beenta Trump iyo inuu taageerayaashiisa kiciyey.
Isaga oo ka yaabay rabshada ayaa wasiirka arrimaha dibbeda Luxemburg, Asselborn waxa uu Trump ugu yeeray “dambiile” iyo “qaswade siyaasadeed”.
Khudbadda Madaxweynaha Somaliland Ka jeediyey Munaasibadda 62-guurada Xuska 26 June
Toos (Live) Halkan Ka Daawo Xuska Maalinta Qaran ee Madax…
Munaasabad balaadhan oo Maalinta 26-ka June lagu xusayay ayaa lagu…